Ngwongwo ahia (dika Wikipedia si di na March 19 na 10:18 am Pacific Daylight) bu: Omume obula nke n’eme ka ere ahia na ahia ndi n’ere ahia. Na ọkwa ụlọ ahịa na-ere ahịa, ire ahịa na-ezo aka n'ọtụtụ ngwaahịa dị maka ọrịre na ngosipụta nke ngwaahịa ndị ahụ n'ụzọ ọ ga-akpali mmasị ma rata ndị ahịa ịzụrụ. Akpa (apọkrịfa) akụkọ nke ịzụ ahịa na data metụtara akwa bekee na-ehichapụ
Fraịde, Ọktọba 18, 2013 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Ọ bụ ezie na ntọala nke iwulite saịtị ka na-egwu egwu, ọ bụ ọdịnaya ahụ na-eme nke ọma ugbu a na-eme ka ụlọ ọrụ ahụ na-eme nke ọma na itinye ego na azụmaahịa azụmaahịa dị ukwuu. Ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị nyekwara ego kpamkpam na search engine njikarịcha ahụwo ndị investments furu efu… ma ụlọ ọrụ ndị nọgidere na-asọ maka mkpa, Ugboro na-adịbeghị anya ọdịnaya na nyere uru ha na-ege ntị na-ahụ ụgwọ ọrụ. Dịla njikere maka ụwa ọhụrụ nke njikarịcha njin ọchụchọ,